Isi Semalt: N'elu Google na gaba
Ọ nwere ike isi ike ịgwa ụlọ ọrụ ịzụ ahịa iche.
Dị ka ọ na-agbanwe, ha niile mara mma nke ọma n'ịre ahịa n'onwe ha. Mgbe ha nile na -eme otu nkwuputa a di egwu –eweta ahia gi n'ihu anya karie, zuo ahia gi, tinye ndi ahia gi –yaji mara ima iji, na nke i gha eleghara anya?
Iji ghọta otu esi ekewapụ ọka wit na igbogbo ọka, ka anyị lelee ụlọ ọrụ na-emejuputa akpa ego na-eme ihe ziri ezi: Semalt.
Gịnị bụ Semalt?
Semalt bụ ọrụ SEO na azụmaahịa guzobere na 2013. companylọ ọrụ ahụ bụ ụlọ ọrụ zuru oke, nke pụtara na ọ nwere ike ibunye mgbasa ozi azụmaahịa site na mbido ruo n'isi. O nwere otu ikike dị na ngalaba SEO na nchịkọta, ebe ọ na-enye ọtụtụ ọrụ pụrụ iche.
N'afọ ndị ka e guzobere ya, Semalt etolitewo n'ike nke azụmaahịa zuru ụwa ọnụ. N'inyocha ihe dị ka saịtị nde 1.5 na ịnya isi ihe karịrị ndị ọrụ 600,000, Semalt aghọwo onye ndu ngwa ngwa na SEO na ahịa azụmaahịa na-egosighi ihe ịrịba ama nke ịkwụsịlata. Ndị otu na-ahụ maka ihe ndị okike na ndị ọkachamara na-enyere gị aka, ị ga-ezute ebe a!
That's nwere ike ikwu, "nke ahụ dị mma ma dịkwa mma, mana olee otu m si mara na Semalt kwesịrị oge na ego m?" Iji zaa ajụjụ a, anyị ga-elerukwu anya n'ọrụ ya.
Semalt na SEO
Kedu ihe ụlọ ọrụ ahụ na-enye n'ihe banyere ọrụ SEO? Should kwesịrị ịdị na-akpachapụ anya na ụlọ ọrụ ahịa ọ bụla na-ekwe nkwa ụwa, ma ọ bụ na-edozighi anya banyere otu ọrụ SEO ha si arụ ọrụ, n'ihi na nke a bụ ihe ịrịba ama na ha ga-elebanye anya ma ọ bụ na ha na-aghọ aghụghọ na sistemụ ịnye nsonaazụ ngwa ngwa ma dị mkpụmkpụ. .
N'okwu Semalt, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọrụ SEO atọ dị iche iche: AutoSEO, FullSEO na E-Commerce SEO, ma banye n'ime nkọwa gbasara ọrụ nke ọ bụla.
Zuru okè maka onye ọ bụla na-achọ itinye aka na mkpịsị ụkwụ ha n'ime ụwa nke SEO, AutoSEO na-enye ndị ahịa azụmaahịa ngwa ngwa, dị mfe ma dị irè na njikarịcha ọchụchọ. Ya:
Na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ gị
Na-atụ aro ndozi
Na-anapụta akụkọ mgbe niile
Ma ọ na-eme ihe a niile maka obere $ 0.99 !
Maka ndị chọrọ ịhụ nsonaazụ na-adịte aka ma na-adịte aka, ọ nweghị ihe na-atụnyere mmadụ imetụ aka, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ngwugwu Semalt nke ngwugwu FullSEO na-enye. Nweta nyocha miri emi, njikarịcha na nkwado sitere na ndị otu ọkachamara nke mụbara okporo ụzọ weebụsaịtị na mba 177 dị iche iche. Y’oburu na ichoro ka ihe ochicho nke oma gha eme.
Ebe nrụọrụ weebụ e-commerce na-enye ihe ịma aka dịtụ iche na weebụsaịtị ndị na-adịghị ere ike n'ịntanetị. A na-ewu Semalt nke E-Commerce SEO onyinye iji lebara ajụjụ ndị pụrụ iche a na-enweta anya site na ire ngwongwo na ọrụ n'ịntanetị, site na ịchụ ajụjụ azụmahịa na obere igodo dị ala na mpaghara gị akọwapụtara, si otú ahụ chọta ndị ahịa ị na-achọ.
Semalt na nyocha
Ihe omuma bu ike. Can ga - akụ naanị ndị asọmpi gị ma duru ndị ahịa ma ọ bụrụ n’ịghọta ndị asọmpi gị na ahịa. Agencylọ ọrụ zuru oke kwesiri inye ọrụ nchịkọta zuru oke nke na-enye ụlọ ọrụ gị ozi niile ọ chọrọ iji nwee ihe ịga nke ọma.
Nchịkọta Semalt na-enye gị ohere ịmepụta foto zuru oke banyere ọnọdụ ahịa gị. Ya:
Etu gi na ndi n’eto mpi si eme
Na-akọwapụta usoro ahịa ga-enyere gị aka ịga n’ihu
Na -emepụta nghọta ga-enyere gị aka ịchọpụta ahịa ọhụrụ.
Ọ na-ewulite usoro nke ozi ị ga - esi nweta atụmatụ azụmahịa zuru oke.
Na-achọ ka iwu mee ya
Ka ị chọpụtasịrị akụkọ banyere ụlọ ọrụ azụmaahịa ahụ, jide n'aka na ha zuru oke, wee chọpụta na ha na-enye arụmọrụ zuru oke, nke egosipụtara nke ọma na ụlọ ọrụ na-eduga kwesịrị, ọ bụ oge iwere ya na igwe mmadụ ahụ. Enweghị ụzọ kachasị mma ị ga-esi nyochaa ogo nke onye gị na ya na-azụ ahịa karịa ịnụ ihe n'aka ndị soro ha na mbụ.
Ọmụmụ ikpe bụ ụzọ dị mma iji lelee kpọmkwem otu ụlọ ọrụ si arụ ọrụ, yana ihe ị ga - atụ anya ya ma ọ bụrụ na ị ga-eji ọrụ ha. Semalt nwere ọtụtụ ọmụmụ banyere weebụsaịtị ya, na-eme ka ị hụperetụ ma ọrụ ha na nsonaazụ ha.
Enwere ụzọ dị mfe iji lelee izi ezi nke ụlọ ọrụ gị: wụpụ n'ịntanetị ma hụ ihe websaịtị niile nwere ikwu. N'ihi nnwere onwe ihe ọmụma nke ịntanetị na-enye, ọ bụ ugbu a nnwale enweghị ụlọ ọrụ iji zoo eziokwu na ha na-ewere ụzọ dị mkpirikpi ma ọ bụ na-anaghị enye ha nkwa.
Lelee nyocha nke Google na Facebook nyocha. Ọ bụrụ na, dị ka Semalt, ha nwere akara Google Review nke 4.5 / 5 na akara ngosi nke Facebook Review nke 4.9 / 5 (yana ndị na-eso 170,000) , ị nwere ike nwee obi ike na ha bụ nnukwu nhọrọ. Semalt na-enyekwa ọtụtụ narị ihe akaebe edere na vidiyo na saịtị ya, nke na-enyere ndị ahịa aka ị nweta nghọta nke ụlọ ọrụ dị ka ya na ha.
Ole nke omume
Otu ihe dị mfe nke nwere ike inye aka ikewapụ ụlọ ọrụ kacha mma na ndị ọzọ bụ nbudata. You chọrọ ịmara na gị na ndị ezigbo mmadụ ga-aghọta gị, na ndị ọ ga-abụ ihe obi ụtọ iso gị rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-egosi akụkụ ya na-atọ ụtọ, nke ahụ bụ nnukwu ihe ịrịba ama.
Were Semalt nọ n'ọfịs mascot, Turbo the Turtle dịka ọmụmaatụ. Ọ ghọrọ akụkụ nke ndị otu Semalt mgbe ha kwagara n'ụlọ ọrụ ọhụụ na 2014, ebe mgbazinye ụlọ gara aga hapụrụ ya. Ugbu a ọ na - anụ ụtọ ndụ n'ime nnukwu aquarium, ma nwee profaịlụ nke onye ọrụ ya (ọ bụ onye na - agba ajụjụ ọnụ) na weebụsaịtị!
Ihe dị iche na Semalt
Na mkpokọta, Semalt na-enye usoro zuru oke nke ihe ị ga-achọ na ụlọ ọrụ SEO na ụlọ ọrụ zuru oke. Ọ na-enye nkwado zuru oke nke ọrụ ihe omimi, na-enyocha ya nke ọma, nwee ndekọ egwu egosipụtara, ma na-enyekwa uru a niile ọnụahịa dị egwu.
Kedu ihe ọzọ, ebe gị na ụlọ ọrụ rụkọrọ ọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba niile dị n'ụwa, ị nwere ike inwe obi ike na Semalt na-asụ asụsụ obodo gị! Ndị otu Semalt amachaghị asụ n'asụsụ Bekee, French, Italian, Turkish, Ukrainian, Russian na ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ ọrụ nwere ike inye aka mee ka azụmahịa gị gaa ebe ọ kwesịrị ịga, ọ ga-adị mma ka ị họrọ Semalt?